Dowladda Qatar oo beenisay in lacago ay soo marsiiso Fahad yaasiin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda Qatar oo beenisay in lacago ay soo marsiiso Fahad yaasiin.
Dowladda Qatar oo beenisay in lacago ay soo marsiiso Fahad yaasiin.
Dowladda Qatar ayaa beenisay inay jiraan lacago ay Soomaaliya usoo mariso Agaasimaha Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya (NISA) Fahad Yaasiin.
Eedayntaas ayaa ku jirtay waraysi uu VOA siiyey safiirkii hore ee Maraykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz.
Qoraalkaas ayaa waxay Qatar ku sheegtay inay jirto lacag dhan $20 Milyan oo sanadkii tegay ay ku taageertay miisaaniyada dowladda, waxayna hoosta ka xariiqday inaysan jirin lacag madow oo ay geliso Soomaaliya.
“Qatar waxay door wax dhisid ah ka ciyaarta Soomaaliya, taasi oo aan uga gol leenahay in aan ku caawino madax-banaanida, degenaanshaha iyo horumarinta Soomaaliya. Dadaalada Qatar iyo mowqifkeedu wuxuu lamid yahay midka QM iyo saaxiibada kale ee Beesha Caalamka,” ayaa lagu yiri qoraalka Qatar.
Sidoo kale waxay iska fogeysay inuu jiro xiriir hoose oo ka dhaxeeya Agaasimaha Hay’adda Nabad-Sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasiin, islamarkaana ay taageerada qarsoodiga ah ee dowladda usoo mariso asiga, sida uu hore ugu eedeyay safiirkii hore Mareykanka ee Soomaaliya.
Previous articleDowladda Qadar oo si kulul ugu jawaabtey Eedeyntii Danjirihii hore ee Mareykanka u joogey Soomalia Stephen
Next articleMadaxweynihii la dilay ee Chad Idriss Déby oo wiilkiisa General Mahamat Kaka loo magacaabay hoggaamiyaha waddanka.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed laftaagreen oo bisha ramadaan ka...
Xili saakay ay bilaabatay Bisha Barakeysan ee Ramadaan ayaa Madaxweynaha dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed ( laftaagreen) waxaa uu ka hadlay...
Pep Guardiola “ PSG waxay aheyd koox adag, waana...
Website-yada ugu caansan caalamka oo saacado hawada ka baxay maanta...
BBC oo lagu dhaliilay qaabka ay u martay waraysi ay qaadday...
Shirka dalalka hodanka ah ee G7 oo saakay furmi doono...
Ku simaha Duqa magaalada Ahne Gudoomye ku Xigeenka 1aad ee...